Faha-11 taona am-ponja: Tafatafa niarahana tamin’ny zanakavavin’ilay Vietnamiana mpanohitra, Tran Huynh Duy Thuc · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Desambra 2019 5:06 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Română , Italiano, English
Tran Huynh Duy Thuc. Sary: Facebook
Ity lahatsoratra nasiam-panovana ity dia avy amin'ny Tetikasa 88, tranonkalam-baovao mahaleotena manoratra momba an'i Vietnam, ary naverina navoaka tato amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fizarana votoaty.
Iray amin'ireo mpanohitra politika malaza indrindra ao Vietnam Atoa Tran Huynh Duy Thuc ary manana vina fanavaozana ara-politika feno ho an'ny firenena.
Injeniera sady mpandraharaha avy ao an-tanànan'i Ho Chi Minh izy. Nanorina ny EIS, orinasa tolotra finday aterineto mahomby any Vietnam izay manana sampana roa any Singapaoro sy any Etazonia izy. Io no orinasa Vietnamianina voalohany nampiditra teknolojia avo lenta tany ivelany. Nanorina ny vondrona fikarohana Chan izy mba handalinana ny toekarena, politika, ary ny fiarahamonina Vietnam sy ny firenena hafa. Nibilaogy olana ara-tsosialy, ara-politika sy ara-toekarena any Vietnam eo ambanin'ny anarana Tran Dong Chan izy.
Manamarika ny faha-10 taona nidiran'i Thuc an-tranomaizina haharitra 16 taona ny taona 2019, sazy an-tranomaizina adaladala nampiasaina hanasaziana manam-pahaizana sy matihanina amin'ny fandraharahana mahomby izay mikarakara sy miady ho an'ny fireneny. Ny 29 Novambra 2019 no tsingerintaona faha-11 nidiran'i Thuc am-ponja. Nanana fotoana nanaovana fanadihadiana an'i Ramatoa Tram Tran, zanakavavin'ny Andriamatoa Tran Huynh Duy Thuc ny Tetikasa 88, mba hahafantarana bebe kokoa momba ny fepetra iainany ankehitriny, ny fahasalamany, ary koa izay dingana fampiakarana fitsarana ambony ataon'ny fianakaviana sy Atoa Thuc.
Ny Tetikasa 88: Azonao atao ve ny milaza aminay bebe kokoa momba ny fahasalaman'Atoa. Thuc? Manakorontana ny fiainana andavan'andron’ Atoa Thuc any am-ponja ve ny mpiasan'ny fonja?
Tram Tran: Mbola miorina mafy ny fahasalaman'ny raiko amin'izao fotoana izao. Na dia any am-ponja aza izy, dia mbola miezaka manao fanatanjahan-tena, manaraka sakafo tsy misy hena, ary misakafo mahalala onony mba hisian'ny fahasalamana. Indray andro, dia nahena ny fotoana namelàna ny raiko hivoaka ivelan'ny fonja sy ny fotoana hamelàna azy hampiasa herinaratra, ka tsy nanana fahazavana ampy ho an'ny vakiteny izy. Saingy nandefa fitarainana sy niady ho an'ny raiko ny fianakaviako mba hahafahany mampiasa jiro mandeha bateria hamakiana boky sy handaniana fotoana an-tokotany. Noho ny fijerena sy ny feon'ny vondron'olona tao anatiny sy tany ivelany, dia afaka nampiasa jiro sy mivoaka an-tokotanin'ny fonja mandritra ny fotoana omen'ny lalàna izy. Na izany aza, dia mbola miatrika zava-tsarotra maro ny raiko izay manelingelina ny fahasalamany ara-tsaina.
Ms. Tram Tran, Mr. Tran Huynh Duy Thuc’s daughter
Ny Tetikasa 88: Afaka nahazo loharanom-baovao ivelany ve i Mr. Thuc? Vao haingana izay, mpikatroka maro, mpanao gazety mahaleotena, na olo-tsotra koa aza no nampahorian'ny governemanta eo an-toerana noho ny fanehoana hevitra.
Tram Tran: Mikasika ny fidirana amin'ny fampahalalam-baovao ivelany dia mbola mamela ny raiko hijery ny fantsom-baovao telo ofisialy sy mamaky gazety ofisialy mandritra ny fotoanany andavanandro ny fitsipiky ny fonja. Ankoatra izay, dia mbola miezaka mividy gazety sy boky bebe kokoa ny fianakaviako mba handefa izany tsy tapaka ho an'ny raiko amin'ny entana isam-bolana. Avela miantso any an-trano mandritra ny dimy minitra isam-bolana ny raiko, ary miezaka manome vaovao farany ho azy momba ny zava-misy any ivelany ny rehetra ao an-trano, ary avy eo izy manontany momba ny fahasalaman'ny tsirairay, saingy tsy afaka mifanakalo hevitra maharitra kokoa. Ka tato ho ato ny fianakaviana tsy nahita hirika hahafantatra ny heviny momba ny fitomboan'ny fanenjehana amin'izao andro izao.
Na izany aza, efa ela izay, nilaza tamin'ny fianakaviana ny raiko fa amin'ny taona 2019, dia hisy hetsika anti-Shinoa matanjaka sy mafy. Ary hatramin'izao, dia ankehitriny efa hitan'ny olona fa ohatra miavaka maneho izany ny tolona any Hong Kong. Nilaza ihany koa izy fa amin'ny fiatrehana ny fotoana ankehitriny dia ho tsapan'ny olona fa tsy voaaro ry zareo ary ho kivy. Fa tokony hihazona ny finoany ny vahoaka Vietnamiana fanantenana. Toy ny fotoana mampivaingana anaty hatsiaka izao fotoana izao – amin'ny 0,99 degre Celcius dia toa mbola rano ihany ny rano, fa hivaingana avy hatrany izany raha vao mahatratra 0 degre Celsius. Hitranga toy izany koa ny fiovan'izao tontolo izao.
Ny Tetikasa 88: Afaka mitsidika sy mifandray amin'Atoa Mr. Thuc araka ny tokony izy ve ny fianakaviana? Misy ve ny sakantsakana amin'ny fanomezana azy ny vaovao farany ara-politika sy ny toe-draharaha famoretana ankehitriny ao Vietnam? Mbola afaka mahazo taratasy sy lahatsoratra nosoratan'i Atoa Thuc ve ianareo?
Tram Tran: Nanomboka tamin'ny faran'ny taona 2018 ka hatramin'izao, dia imbetsaka notsabahana sy noferan'ny fitantanana ny fonja ny fifandraisana an-taratasy eo amin'ny raiko sy ny fianakaviako. Talohan'izay dia afaka nanoratra taratasy izy ary nametaka ireo hevitra sy lahatsoratra maromaro momba ny toe-draharaha ara-politika ao Vietnam sy izao tontolo izao ao anatin'izany.
Ny volana Jolay 2018 anefa, rehefa nahalala ny manam-pahefana fa ahitana ny heviny sy ny fomba fijeriny ireo taratasy ireo, dia niditra an-tsehatra haingana izy ireo ary namaky ny taratasy tamin'ny fomba tsy ara-dalàna alohan'ny handefasana azy, ary voalaza fa namotika azy rehetra ireo. Tsy ela taorian'izay, dia na ny taratasy mahakasika ny raharaham-pianakaviana azy dia fanahy inaiana tsy nalefa.
Ankoatra izany, na ny taratasy sy ny entana izay nalefan'ny fianakaviana ho an'Andriamatoa Thuc aza dia niharan'ny fanarahamaso mafy. Nanokatra ireo fonosana ny manam-pahefana ary namaky ny vaovao rehetra tao anaty taratasy na entana. Ny fifandraisana an-taratasy no endrika fifandraisana lehibe indrindra eo amin'ny raiko sy ny fianakaviako. Maro tamin'ny fandinihany sy ny heviny no noraisin'ny besinimaro ao Vietnam.
Noho ny tsy fitsaharana ho voantohintohina dia voatery niala tamin'izany fomba fifandraisana izany ny fianakaviana.
Ny Tetikasa 88: Ahoana ny fandehan'ny fandravana ny raharaha amin'ny sazin’ Atoa Thuc? Raha ny zava-misy eto amintsika, dia ny sampam-pitsarana ara-panjakana iray ihany, toy ny Fitsarana Tampony Entim-bahoaka, ny Fampanoavana Tampony Entim-bahoaka, ny Fitsarana Avo Entim-bahoaka, na ny Fampanoavana Ambonny Entim-bahoaka no afaka mampiditra ny fandravana ny raharaha?
Tram Tran: Efa ela no nalefa tany amin'ireo manampahefana tompon'andraikitra rehetra ny fampiakarana ho any amin'ny fandravana, saingy tsy mbola nahazo valiny avy amin'izy ireo hatramin'izao ny fianakavianay.
Tsy resaka fandravana raharaha ihany ity ady ara-pitsarana ity. Tamin'ny 7 Jolay 2018, nanao “Fangatahana hanafoanana ny sazy sisa tavela” ny raiko, “mifototra amin'ny Andininy faha-63 amin'ny fomba vaovao amin'ny heloka bevava amin'ny fiarovam-pirenena ao amin'ny Fehezan-dalàna ady heloka bevava nivoaka tamin'ny 2015 ny raiko, izay manasazy olona iray nikasa ny hanao heloka bevava hanongana ny fitondram-bahoaka. amin'ny sazy herintaona hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina.
Mino izahay fa namorona zo manan-danja mankany amin'ny lalan'ny fitakiana rariny ho an'ireo izay voampanga tamim-pahadisoana tamin'ny “fanonganana ny fitondrana entim-bahoaka” ny Fahezan-dalàna Heloka Bevava nivoaka tamin'ny taona 2015, indrindra amin'ny raharaha mahakasika ny raiko. Efa nanao fangatahana ofisialy momba ny fanampiana ara-pitsarana tamin'ny mpisolovava izy mba hanatanterahana ireo dingana ilaina mifanaraka amin'ny Fehezan-dalàna momba ny Heloka bevava taona 2015.
Tamin'ny 8 aprily 2019, nandefa fanangonan-tsonia tany amin'ny Komity Maharitra ao amin'ny Antenimieram-pirenena sy ny filohan'ny Antenimieram-pirenena ny dadabeko – Andriamatoa Tran Van Huynh – mba hangataka azy ireo hanao asa fanarahamaso ny fanatanterahana sy ny fampiharana ny lalàna mifanaraka amin'ny ny Lalàm-panorenana.
Ny Tetikasa 88: Inona no tanjon'ny fampiakarana ny raharaha? Fantatr’ Andriamatoa Thuc ve izany, ary inona ny heviny?
Tram Tran: Ny tanjonay dia ny hitaky amin'ny fitondrana mba hanaja ny lalàna sy ny fitsipika manan-kery, izay tsy maintsy ampiharina sy hajaina raha mihatra. Izany no nahatonga ny raiko nanohitra mafy ny fitsarana miangatra sy mitanila, ary hampiasa tsy tapaka ny lalàna ny fianakavianay mba hiarovana ny zony sy hitakiana ny rariny. Na amin'ny fampiakarana fitsarana ambony ho amin'ny fandravana na amin'ny famerenana indray ny fangatahana, hiady izahay mandra-pivoaka azy, mba hiantohana fa omena voninahitra ny zon'olombelona any Vietnam.
Notanterahina araka ny fanirian'ny raiko ny fampakarana ny fandravana sy ny fandinihana indray ny sazy. Io no fombany hiadiana ho amin'ny demaokrasia: miaro ny zon'olombelona amin'ny alàlan'ny fampanjakana ny lalàna. Efa nahafantatra ireo hirika hahazoana famotsorankeloka manokana ho azy ny fianakaviana sy ny raiko. Fantatry ny raiko ny lanjan'ity fomba ity, nefa mbola te hiady izy ary ho afaka amin'ny alalan'ny fampiasana ny lalàna. Mino izy fa, amin'izay fotoana izay ihany, ho santatra ny raharaham-pitsarana hanajana tokoa ny lalàna. Izany indray no hitondra lalana maro amin'ny fanafahana ireo voafonja maro hafa noho ny feon'ny fieritreretana, izay nosaziana ihany koa noho ny ady ho fandalàna ny zon'olombelona.